Izesekeli zefashini, i-Spring-Summer 2016: izambulela zabesifazane, amagilavu ​​angenalutho
Izesekeli zefashini, i-Spring-Summer 2016, isithombe
Izesekeli ezithakazelisayo - yilokho okwenza ukuphelelwa kwesithombe nokukhishwa. Ngokushintsha umumo noma umbala wesikhwama, ugqoke iglavu noma isethi, ushintsha isitayela sakho. Phakathi nesonto lokugcina lemfashini e-New York, safunda ukuthi yiziphi izesekeli ezizofashisa entwasahlobo nasehlobo ngo-2016, njengoba sizojabula ukukutshela.
Izesekeli zemfashini kunazo zonke
Ake siqale ngamathrendi ashisa kakhulu. Okokuqala, izikhwama. Sekuyisikhathi eside, okuthandwayo kwanikezwa ama-minimalistic clutches kanye nezikhwama ezincane kulolu chungechunge. Kulesi sizini, amamodeli amakhulu abuyele, futhi izindlu ezidumile zaqala ukuzihlobisa nge-logos zazo. Ngisho uGucci noKristu Dior balandela umkhuba omusha.
Uma ekwindla bonke abesifazane abafake imfashini bembethe indlebe eyodwa kuphela, manje abaklami banikeza umfutho wezinhlobonhlobo nezinhlobo ezihlukahlukene. Esikhathini eside, cishe emahlombe, namacici, esiwabona kuqoqo likaLowewe, uNine Ricci uhlongoza ukugqoka imihlobiso engafani.
Izinkathi ezizofika ngesikhathi se-Spring-Summer 2016 kufanele zikhululeke ngangokunokwenzeka. Ngesimo sezulu esishisayo, khetha izimbadada ze-gladiator ngezibopho eziningi zesikhumba, ukuze uthole izicathulo noma izicathulo ezingaphezulu noma ezipholile, kodwa ngaso sonke isikhathi ngejubane eliphansi.
Naphezu kweqiniso lokuthi ilanga liqala ukushisa, kodwa entwasahlobo ka-2016 nakanjani awukwazi ukwenza ngaphandle kwesambulela semfashini. Kuqoqo lwakamuva lwezesekeli yizimbulume zamakhosi ezinhlobonhlobo zokudala, isibonelo, "pagoda" noma "dome". "Ama-pagodas" kufanele abe nemibala ekhanyayo, egcwele, isibonelo amathoni aphuzi noma ama-pink, noma ngokuphambene, ama-shadow shade asetshenziselwe, anephethini elibucayi le-floristic kanye nama-ruches. Omunye umbala onomfutho ubuningi. Imininingwane enjalo ejabulisayo ngeke ikuvikele kuphela ngesimo sezulu, kodwa izophinde ivuselele.
Ungaphumi emfashini nasekhaya "obala" obala. Zingahlotshiswe ngemihlobiso emnyama neyemhlophe engabonakali noma izithombe ezinhle.
Izigilavu ​​ezithakazelisayo, isithombe
Entwasahlobo, amagilavu ​​namanje ayimfanelo yangempela yengubo. Njengemikhono ¾ ethandwa kakhulu, amagilavu ​​kufanele abe eside: kuze kube ngendwangu noma ngaphezulu. Akudingeki abe yisikhumba, u-Lanvin noMarc Jacobs bakhethe izindwangu zendwangu kanye ne-suede, bahle kakhulu bembethe ingalo.
Uma ukhetha izinketho eziningi zokudala, bese ukhetha amagilavu ​​afanelekayo ngaphandle kweminwe, eyayihamba esuka ku-warder yebhayisikili eya kuma-podiums emfashini. Zingenziwa ngesikhumba futhi zihlotshiswe nge-cutouts, izigqoko, ama-rivets nama-zippers ezihlukahlukene. Ubude buhluka kusukela ku-ultrashort, lapho isesekeli singavali ngisho nokuvala isihenqo, ukuya esiklasini nasemasikini. Ngendlela, ungahlanganisa ama-mitts hhayi kuphela ngezikhumba zesikhumba, kodwa ngisho nangezingubo zakudala ngesitayela se-Chanel.
Ukuqothulwa kobudlova kuba amagilavu, okukhumbuza izindwangu zokugqoka. Ziyakwazi ukuhlotshwa ngezingcezwana kanye namaketanga, ama-paillettes, ama-fringe kanye ne-tinsel ekhanyayo. Akudingekile ukuphawula ukuthi izinsiza ezinjalo ngokushesha ziba yingxenye eyinhloko yesithombe, ngakho-ke, uqaphela kakhulu ukuyiphatha.
Njengoba ungabona, ukuqoqwa kwezesekeli zasehlobo zonyaka kahlobo 2016 zihlaba umxhwele ngokuhluka kwazo. Kumele ugcwalise ikhabethe lakho ngezinto zangasese nezingavamile: isambulela esibhakabhakeni, isikhwama esinamandla, amagilavu ​​afanelekayo ngaphandle kweminwe, izibuko ezingenangqondo. Bayokwenza isithombe sibe yinkimbinkimbi futhi sakhiwe ngobuningi, ingubo yakho izofuna ukucatshangelwa kaningi.
Umlando wokwakha i-skirt encane
Indlela yokugcina umuntu-Gemini
Ilayisi iphariji elinama-strawberry kanye ne-yogurt
I-Horoscope ye-Lion-Woman ka-November 2016
Isaladi yamatamatisi aluhlaza ebusika - zokupheka ngesithombe ngaphandle kokufaka inzalo, ngegalikhi, imifino nebhotela, ngesiKorea
Ama-pancake enomnandi ngaphandle kwamaqanda: zokupheka ze-pancake ngobisi, amanzi, i-kefir
UDima Bilan washiya ePrague ngecala
Ukuthuthukiswa kanye nombuso wengane yengane ezinyangeni ezingu-8
Isobho ngebhethoni, ubhontshisi omhlophe nesaladi
Inyosi Gulf "Amatshe Amatshe"
Indlela yokukhetha izingubo ezifanele zezingane
Amakhekhe ngemifino kanye ne-Feta ushizi